Zvakavanzwa munhukadzi runako uye utano
imi muri pano: musha
Ndinogona kuwana kuwana mufaro uye kubudirira? Vanhu vari rakakamurwa mhando mbiri vanhu. chikamu chokutanga chinosanganisira avo, uyo anoramba kufara uye anofadzwa pachake, kubudirira muupenyu, uye kubasa. Asi muboka rechipiri ndivo, vanotungamirira chikamu chokutanga uye vanoda kushandisa kuti muchikwata yokutanga. bvuma, mumwe nomumwe wedu kunge nguva, kana tinogona kunakidzwa zvakakodzera inokudza, asi kana nekuda nomwero, kana isu zvinomudzora ichi nokutya.
More: zviitwa Self-chivimbo!
Munhu wose ari nguva kuneta nguva dzose vanorota mweya, pamusoro, sechiedza hova dzemvura vachamhanya kuburikidza nomuviri, Washing pamwe kwete chete kuneta, asi vose rekusuwa uye nezvekufadza zuva. Zvino, kwazvo, chinonyanya nyore mweya ndiye "murapi" akadaro pamusoro kushushikana, uye kana kuwedzera uku musimba kazhinji? Zvadaro zvinoitika mukuru mweya, iro rinogona kupa kumunetsawo akakwana, nomufaro, It Anoporesa muviri uye, Pakupedzisira, Dzinga kuneta.
More: Shower yepamusoro
Kutarisira muviri muzhizha
muviri Summer iri pasi miedzo miviri: ultraviolet rezuva nemwaranzi uye yakakwirira tembiricha. Kudzivirira nemwaranzi, unofanira kunyatsofunga funga kusarudza unodzivirira rinoreva, uyewo kuderedza nguva aipedza muzuva, haachipo 1,5-2 maawa pazuva.
Achitarisirwa muviri muzhizha, teerera, rinobvunza kudaro. Kana ganda iri kutanga kukura zvinonyadzisa, zvino kushandisa kwesha, kana ganda iri rakaoma, nalehayte mvura. Kutarisira muviri muzhizha anofanira kuva nzwisisika uye enderera.
More: Kutarisira muviri muzhizha
The ganda chinofanira waifadza meso, uye achava nesimba. Pashure pezvose, ganda utano hakubvi nguva dzose pamusoro, chii mari wabhadhara yezvizorwa, runako Salons nezvimwe zvivako uye kunyange zvakakodzera. Kazhinji napo simba renyu, mararamiro, uchityaira. Ndizvo zvose unofanira kuziva uye, kana uchida zvakazara kuita ganda ravo utano.
kutarisirwa muviri zvinogadzirwa
Mumwe nomumwe wedu hunhu vakapa chikamu runako rwayo. Mumwe akamuka gobvu bvudzi dzinoyevedza, uye ndiani – ari eyelashes urefu kwakadaro, kuti hapana ingi harudikanwi kana zvipikiri kubva pakuzvarwa simba uye utano. Asi pane, uyo chitarisiko chako haadi, pano, vanoti, kwete bvudzi, uye negonzo muswe. Asi izvi hazvina kuitwa. runako wako chokunze, uye yomukati kuda, Napo.
More: kutarisirwa muviri zvinogadzirwa
peji 1 kubva 2
Zvizoro kunorapwa muviri